SIRTA MAANTA: Xubinta ugu sahlan oo ay dumarka buurani ka kacsadaan | shumis.net
Home » galmada » SIRTA MAANTA: Xubinta ugu sahlan oo ay dumarka buurani ka kacsadaan
SIRTA MAANTA: Xubinta ugu sahlan oo ay dumarka buurani ka kacsadaan
Mar hadii aad tahay qof guursaday haween buuran ama cayilan waxaa laga rabaa in aad wax ka ogaato ilaa dhowr hab kuwaas oo kuu suura galin kara in aad ka gun gaarto sidii aad u qancin laheed hawenka buur buuran ee aan sida sahaln looga gun gaari kan.
Isku mid mahan dumarka caatada ah iyo kuwa buuran waayo meesha waxaa yaal culeys aad u fara badan waxaan laga doonayaa in aad ciyaarta sariirta ku qaniso qoftaas hadii kale waxaad noqon dontaa nin ciyaarta ku fashilma.
Mar hadii ay sheekada halkaas maree waxaa laga doonayaa in aad dhowr qodob iska fiiriso kuwaas oo wax ka tari doona howsha aad wato.
HOOS KA AQRI QODOBADA LAGA RABO
1: Markaad ciyaarta sariirta bilowdo waxaa laga rabaa in aad ugu horentii aad adan ku dag dagin qofta buuran oo aad noqoto qof meelo badan iska fiirsha.
2: Marka hore dharka ka dhig waa in aad meel walba oo ay ku leedahay laab laabyo aad carabka ka galiso waayo melahas waxaa ay ka daremeysaa raaxo macaan.
3: Markaad rabto in aad gudka hoose u dhacdo ha isku dayin iyado jiifta in aad isticmaasho waayo halkaas fashil ayaa kaga imaan kara.
4: Markaad god yaraha u dhici rabo waa in aad lugaheed aad kor u qaado ama aad ku dhahdo lugaha hor u qaad markas waxaa ku suura gali karta in aad koob yaraha aad u dhacdo.
5: Markaad xuntada daranka aad koob yaraha aad galineyso waa in aada marka hore horay aadan kawada galin fanjarta gali ka bixi gali markaas waxaa ay daremeysaa raaxo macaan iyada ayaa markaas ku dhihi doonta aboowe wada gali.
Title: SIRTA MAANTA: Xubinta ugu sahlan oo ay dumarka buurani ka kacsadaan
Posted by galmada Net, Published at January 17, 2016 and have 0 comments